Puntland Archives - Page 63 of 86 - Puntland Mirror Believable Media Website
December 16, 2016 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Taliye ku xigeenkii ciidamada booliiska Puntland Jaamac Saxardiid ayaa geeriyooday hal maalin kadib markii dhaawac toogasho uu caloosha iyo xabadka kasoo gaaray xilli uu lugeynayay magaalada Boosaaso, sida ay Puntland Mirror u xaqiijiyeen […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Khamiis ah u safray magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Madaxweynaha oo saxaafada kula hadlay garoonka diyaaradaha ayaa sheegay in uu Muqdisho kaga qeybgali doono […]
December 15, 2016 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Dablay hubaysan oo Al-Shabaab katirsan ayaa magaalada Boosaaso ku dhaawacday taliye ku-xigeenka booliiska Puntland Jaamac Saxardiid. Taliyaha ayaa loola cararay isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso halkaas oo lagu dabiibayo, sida ay ilo-wareedyo caafimaad sheegeen. […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa beesha caalamka ka codsaday in ay caawiyaan dadka abaartu saamaysay ee kunool gobolada Puntland. Isaga oo saxaafada kula hadlayay shalay oo Arbaco ahayd magaalada Garoowe, madaxweynaha […]
December 14, 2016 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ayaa wacad ku martay in ay dilli doonto xubnaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ee dhawaan la doortay, sida uu sheegay xildhibaan. Xildhibaan kasoo jeeda Puntland, oo codsaday in aan […]
December 13, 2016 Abdi Omar Bile 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasaarada maaliyada dowladda Puntland ayaa maanta oo Talaado ah baarlamaanka hor geysay miisaaniyada sanadka soo socda ee 2017-ka. Dhaqaale dhan $160, 5600,648 ayay wasaaraddu maaliyadu horgeysay baarlamaanka, iyaga oo ka doodi doona maalmaha […]
December 13, 2016 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada booliiska gobolka Nugaal ee Puntland ayaa gacanta ku dhigay kartoomo khamri ah, sida ay sheegeen saaraakiishu. Ciidamada oo habeenimadii Talaadada ahayd howlgal ka sameeyay caasimada Puntland ee Garoowe ayaa kusoo qabtay 12 […]
December 12, 2016 Abdi Omar Bile 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa maanta oo Isniin ah kusoo gunaanaday caasimada Garoowe, doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee dowladda federaalka Soomaaliya u matali doona dowladda Puntland. Dad gaaraya 1887 qof oo ergo ah ayaa ka qeybgalay […]
December 12, 2016 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa ku sugan magaalada Garoowe ee caasimada Puntland. Cumar Cabdirashiid oo deegaan ahaan kasoo jeeda Puntland ayaa yimid Garoowe maalintii Sabtida ahayd ee asbuucaan. Joogitaanka […]
December 11, 2016 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee Puntland u matali doona dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ah dib uga bilaabmatay magaalada Garoowe ee caasimada dowladda Puntland. Bartamihii bishii lasoo dhaafay ayaa digteero kasoo […]